Ciidamada Maraykanka iyo xulafadiisa duulaanka ku jooga wadanka muslimka ah ee Afqaanistaan ayaa halkooda ka wada gabood fallada ka dhanka ah muslimiinta, waxaana dhacdadii ugu dambeysay ee lasoo wariya ay tibaaxeysaa weerar lagu qaaday masjid. Ciidamo huwan ah ayaa la xaqiijiyay iney weerar kusoo qaadeen deegaan katirsan gobolka Faraah ee dalka Afqaanistaan, halkaasna waxay ku dileen dhowr ruux, halka ay ...	Read More »
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 26-05-1440
Barnaamijka Dhacdooyinka dunida islaamka waa todobaadle maanta oo kale ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan laguna soo qaato akhbaaraadkii ugu waaweynaa caalamka. Dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 01-02-2019 Dhagayso arnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 01-02-2019 tayo dhexe	Read More »
Iyadoo inkabadan hal bil oo kaamil ah ay banaanbaxyo waaweyn ka socdaan wadanka Suudaan, kuwaas oo looga soo horjeedo xukuumadda Al-bashiir, ayaa milliteriga dalkaas wuxuu wacad ku maray iney ilaalin doonaan jiritaanka dowladda. Kulan ay yeesheen saraakiisha milliteriga ayaa shalay ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Al-khurdhuum, waxaana kasoo qeybgalay Abaanduulaha guud ee ciidamada Suudaan, iyo wasiirka gaashandhiga ee xukuumadda. ...	Read More »
Sida uu baahiyay telefeshin ku hadla afka Xuuthiyiinta, malleeshiyaadka ayaa sii daayay askari Aala-sucuud katirsan, kaas oo mudooyinkii u dambeeyay isagoo xanuunsan ku jiray gacanta malleeshiyaadka Xuuthiyiinta. Askariga lasii daayay ayaa sida la sheegay gaaray magaalada Riyaad ee caasimadda maamulka Aala-sucuud, waxaana dhinac kale Aala-sucuud ay sii daayeen todobo malleeshiyo oo maxbuus ahaan ugu jiray gacantooda. Maxaabiis is dhaafsigan waxaa ...	Read More »
Madaxweynaha Faransiiska Oo Weerar Afka ah ku qaaday Islaamka.
Emmanual Macron, madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa weerar afka ah ku qaaday Islaamka iyo muslimiinta, xilli uu ku sugnaa wadanka Masar oo uu booqasho ku yimid. Madaxweynaha Faransiiska Emmanul Macron wuxuu shaaca ka qaaday in wadankiisa uu la kulmay waxa uu ku tilmaamaya “Argagaxisada Islaamka”. Macron ayaa booqasho ku yimid magaalada Al-Qaahira ee dalka Masar, waxaana la yaab leh in isagoo ...	Read More »
Dhuuxa Wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan waxaana lagu soo qaataa wararkii ugu dambeeyay iyo wareysiyo muhim ah Halkaan Ka Dhageyso Dhuuxa Wareysiyada 29 01 2019	Read More »
Maraykanka oo qorsheynaya inuu cunaqabateyn kusoo rogo dalka Venezuela.
Iyadoo xaalad siyaasadeed oo kacsan ay ka jirto dalka Venezuela, kadib markii talada dalkaas ay isku qabsadeen madaxweynaha wadankaas iyo gudoomiyaha Baarlamaanka, ayaa dowladda Maraykanka waxay taageersantahay gudoomiyaha baarlamaanka. Maraykanka ayaa hadda sheegaya inuu qorsheynayo in cunaqabateyn dhaqaale oo adag uu kuso rogo dowladda Venezuela, si gaar ah shirkadda Naftada ee dalkaas. La taliyaha dhanka amniga ee Donald Trump, John ...	Read More »
Weerar Ka dhacay Maraykanka Oo khasaare dhaliyay.
Saacado kahor, dalka Maraykanka waxaa ka dhacay weerar hubeysan, kaas oo dhaliyay waxyeelo kala duwan. Rag hubeysan ayaa la sheegay iney weerareen iskuul ku yaala magaalada Housten ee dalka Maraykanka, waxaana ay dagaal fool ka fool ah la galeen ciidamo katirsan Police-ka. Afhayeen u hadlay Police-ka, wuxuu xaqiijiyay iney dhaawacmeen ugu yaraan 5 askari oo katirsan ciidamada, kuwaas oo isku ...	Read More »
Wararka ka imaanaya dalka Afqaanistaan ee muslimka ah ayaa ku waramaya in halkaas lagu dilay tobanaan askari oo Maraykan ah, kadib markii uu iska hor imaad dhexmaray ciidamada Maraykanka iyo kuwa Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan. Ciidamada Maraykanka ayaa saqdii dhexe ee xalay waxay weerar kusoo qaadeen deegaan ay maamulaan mujahaidiinta Imaarada islaamiga, halkaasna waxaa ku qabsaday kamaa’in qorsheysan ee horey ...	Read More »
Bayaan kasoo baxay hogaanka sare ee Mujaahidiinta Al-Qaacida, islamarkaana ay baahisay mu’assasada As-saxaab ayaa lagu bogaadiyay howlgalkii weynaa ee magaalada Nairoobi, 9-kii bishan Jamaadul Awal ka fuliyeen Inqimaasiyiin katirsan guutada Saalax Nabhaan ee Xarakt Ash-shabaabil Mujaahidiin. Bayaankan oo ka kooban labo beyj, waxaa ciwaan looga dhigay “ Hambalyada howlgallada Qudus Lama Yahuudeynayo”, waxaana hogaanka sare ee Mujaahidiinta uu si diiran ...	Read More »